नेपालकै समुहमा रहेको अफगानिस्तानको लगातार दोस्रो हार , नेपाललाई कति फाईदा ? |
नेपालकै समुहमा रहेको अफगानिस्तानको लगातार दोस्रो हार , नेपाललाई कति फाईदा ?
२०७४, २२ फाल्गुन मंगलवार २१:२५ March 6, 2018 ताजा खबरFeatured, क्रिकेट
काठमाडौं ,फागुन २२ : विश्वकप छनोट अन्तरगत मंगलबार नेपाल सम्मिलित समूह ‘बी’ को खेलमा जिम्बावेले अफगानिस्तानमाथि दुई रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ । क्रिकेट सम्बन्धि सम्पुर्ण खबरको लागि मेरो क्रिकेट डट कम हेर्नू होला ।
जिम्बावे दिएको १ सय ९७ रनको लक्ष्य पछ्याएको अफगानिस्तान ३ बल खेल्न बाँकी छदा १ सय ९४ रनमा अलआउट भयो। कुनै समय १ सय ६४ रन बनाउँदा ४ विकेट गुमाएको अफगानिस्तानले त्यसपछि लगातार विकेट गुमाएको थियो। ३७ ओभरमा सिकन्दर राजाले ३ विकेट लिएपछि खेल जिम्बावेको पक्षमा फर्किएको थियो।
अन्तिम ओभरमा अफगानिस्तानलाई जितका लागि मात्रै ४ रन आवश्यक थियो । तर अफगानिस्तानसँग मात्र एक विकेट बाँकी थियो । त्यो पनि बलर । अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा रन बनाउन नसकेका दौलत जदरानले दोस्रो बलमा एक रन जोडे पनि तेस्रो बलमा सपूर जदरान बीभी भिटोरीको बलमा ब्रेन्डन टेलरबाट क्याचआउट भएपछि अफगानिस्तान जितबाट मात्रै दुई रनले चुक्यो ।
त्यसअघि अफगानिस्तानका लागि राहमत साहले ६९ रन र मोहमद नाबीले ५१ रन बटुले। बलिङतर्फ मुजारबानीले ४ विकेट लिँदा सिकन्दर राजाले ३ विकेट हात पारे। क्रिकेट सम्बन्धि सम्पुर्ण खबरको लागि मेरो क्रिकेट डट कम हेर्नू होला ।
यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको जिम्बावेले अफगानिस्तानलाई १ सय ९७ रनको लक्ष्य दिएको थियो । जिम्बावेले ४३ ओभरमा आफ्ना सबै विकेट गुमाएर १ सय ९६ रन बनाएको हो । अफगानिस्तानी बलरका अगाडि जिम्बावेका सुरुवाती ब्याट्सम्यान जम्न सकेनन् । जिम्बावले दश ओभरको समाप्तिमा ३ विकेट गुमाउँदै मात्र २४ रन जोडेको थियो । क्रिकेट सम्बन्धि सम्पुर्ण खबरको लागि मेरो क्रिकेट डट कम हेर्नू होला ।
नेपालविरुद्ध विष्फोटक ब्याटिङ गरेका जिम्बावेका खेलाडी अफगानिस्तानी बलरसामू निरीह देखिए । जिम्बावेका ७ जना ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकसमेत जोडन सकेनन् । ब्रेन्डन टेलले ८९ र सिकन्दर राजाले ६० रन जोडे।
आजै भएको समूह बीको खेलमा स्कटल्यान्डले हङकङलाई ४ विकेटले हरायो। योसँगै स्कटल्यान्ड र जिम्बावेले २–२ खेलमा जित हात पारे। अफगानिस्तान दुवै खेलमा पराजित हुँदा नेपाल र हङकङ १–१ खेलमा पराजित भए।
अफगानिस्तान : असगर स्टेनिकज़ाई (कप्तान), डावलत जदरान, गुलबदीन नाइब, इहसानुल्ला जानत, मोहम्मद नबी, मोहम्मद शहजाद, नासिर जमाल, जावेद अहमदी, मुजीब रहमान, नजीबुल्लाह ज़द्रन, रहमत शाह, रशीद खान, सामील्ला शिनवारी, शाहपुर जडरान और शारफुद्दीन अशरफ फिल सिमंस (कोच)